Phoniatrics - उपचार र गायन तार को निदान संलग्न एक डाक्टर
phoniatrics गर्न खोज्न गर्दा बुझ्न, तपाईं चिकित्सक को विशेषज्ञता उल्लेख गर्नु पर्छ। Phoniatrics - यो गायन तार को निदान र उपचार सामना एक विशेषज्ञ। Phoniatrics - विशेषज्ञता अपेक्षाकृत युवा र विरल छ। हरेक क्लिनिक विकास वा आवाज को पुनर्वास मा लगे गरिनेछ जो एक डाक्टर पाउन सक्नुहुन्छ। अक्सर, विरामीहरु phoniatrician गहन, अत्यधिक विशेष प्राप्त भन्ने तथ्यलाई बावजुद, एक ENT-डाक्टर गर्न उपचारको लागि उल्लेख छन्।
चिकित्सा ध्यान खोजिरहेका कारण
चिकित्सा phoniatrician धेरै अवस्थामा आवश्यक। त्यहाँ रोगहरु कि सक्छन् हनन मानव आवाज को एक नम्बर हो। प्राप्त एक विशेषज्ञ परामर्श निम्न अवस्थामा मनमोहक छ:
त्यहाँ आवाज परिवर्तन भएको थियो। कतिपयले एक चिसो सबै समय ठान्छन्।
तपाईं धेरै वर्ष को लागि धुम्रपान र आफ्नो आवाज rougher थियो याद गर्न थाले।
तपाईं, यो गाह्रो कुरा पाउन आवाज कमजोर र inexpressive सुनिन्छ।
समय समयमा त्यहाँ आवाज को एक हानि छ।
म गायन दायरा ध्वनि परिवर्तन भयो।
म गायन तार मा तनाव महसुस गरे।
तपाईंले बोल्ने अघि, खोकी गर्न आवश्यक छ।
व्यावसायिक गायक लागि चिकित्सकको - लामो समय को लागि यो कि phoniatrician लाग्यो थियो। तर वास्तवमा त्यहाँ आवाज को हानि गर्न प्रमुख धेरै रोग अवस्था र समस्या मात्र गायक र अभिनेता झुकाउ छन्।
मुख्य रोगहरु डाक्टर phoniatrician व्यवहार गर्ने
एउटा कुरा व्यक्ति बिरामी छ भनेर शङ्काको छ। अर्को कुरा - को निदान। यस चिकित्सक, बाल विशेषज्ञ वा Otolaryngologist यी निदान को एक पहिचान भने, यो phoniatrics गर्न एक नियुक्ति गर्न आवश्यक छ:
laryngitis (र तीव्र र क्रोनिक मा);
को गायन तार ( "भाषण" पेशा) को अवरोध;
को कण्ठ (सौम्य वा घातक प्रकृति) को neoplasms;
paresis वा गायन तार को पक्षाघात;
कण्ठ को stenosis (कुनै पनि रोग)।
निर्दिष्ट गर्ने "बोली" अक्सर phoniatrician जो पेशों, - अभिनेता, गायक, शिक्षक, lecturers, गाइड, वक्ता र राजनीतिज्ञ। साथै, यो prompters, बिक्री सलाहकार, आपतकालीन लाइनको संचालक, र धेरै अन्य।
के डाक्टर phoniatrician गर्न सक्छन्?
गहन विशेषज्ञता सबै भन्दा सही उपचार खुराक चयन गर्न डाक्टर अनुमति दिन्छ। यो हुन सक्छ:
हर्बल औषधी र यति मा।
के निदान विधि phoniatrician प्रयोग गर्न सकिन्छ? यो थाइरोइड palpation, एक्स-रे, angiography, laryngoscopy, glottografiya पकड videostroboskopiya। यी विधिहरू साथै अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, तोकिएको गर्न सकिन्छ सीटी स्क्यान र विश्लेषण।
हामी डाक्टर, phoniatrics बच्चाहरु चाहिन्छ?
जवान छोराछोरीलाई अक्सर रुन, चिसो समात्नुहोस्, laryngitis र laryngotracheitis ग्रस्त। यो बाल विशेषज्ञ उल्लेख गर्न अवसर बन्नेछ। आमाबाबुले बस एक योग्य परामर्श ENT phoniatrician पकड सक्छ के थाहा छैन।
phoniatrics द्वारा मात्र केटाकेटीलाई अपील छैन। अक्सर विरामीहरु यौवन अवस्था समयमा विशेषज्ञ किशोरीहरूको छन्। को किशोरी गायन मा लगी भएको छ भने विशेष गरी महत्त्वपूर्ण समसामयिक सल्लाह हो। आवाज पाठ को उत्परिवर्तन समयमा बच्चाहरु phoniatrician निरीक्षण गर्नुपर्छ।
एक सानो विवरण
संगीत विद्यालय, choirs लागि phoniatrics संग गायन स्टूडियो सहयोग धेरै उपयोगी, तर आवश्यक हुन सक्छ। तर एक व्यक्ति स्वर गम्भीर ध्यान दिन भने, आवश्यक contraindications को अभाव उच्च गायन लोड मा सहायता आवश्यक संगीत विद्यालय वा उच्च शिक्षा को संस्थाले मा त भर्ना गर्न। यो प्रमाणपत्रलाई चिकित्सक phoniatrician दिन्छ।
आवाज को हानि लागि आपतकालीन सहयोग
पहिलो आवश्यकता phoniatrics यदि आफ्नो आवाज हराएको - मौन। तर यो सधैं सम्भव मौन रहने छ। अवस्थाहरू एक रिपोर्ट वा प्रदर्शन असम्भव phoniatrician रद्द जहाँ आपतकालीन सहायता प्रदान गर्दछ। यो एक घन सिंचाई कण्ठ एड्रेनालाईन। यो प्रक्रिया पछि, आवाज फर्के, लामो समय को लागि तर छैन। को योजना कार्यहरू 1.5-2 घण्टा (पुन इंजेक्शन काम गर्दैन) हुन छन् लागू। एड्रेनालाईन को जलसेक र गायन धेरै पछि दुई दिन को लागि कुरा गर्न सक्दैन।
दूध संग प्राप्त क्याल्सियम क्लोराइड - आपतकालीन को एक नरम संस्करण। यो पेय चाँडै आवाज को हानि सामना गर्न मद्दत गर्छ।
को ओम्स्क को उल्लेखनीय क्षेत्रीय क्लिनिकल अस्पताल?
लक्षण र सावधानीहरु कसरी उपचार गर्न कब्जियत
बच्चा को पेट गुहा को अल्ट्रासाउंड समाउँदै।
कलिनिन्ग्राद, अस्पताल उपचार: नाम, ठेगाना, समीक्षा
कसरी हर्मोन लागि रगत दान गर्न, सही?
घनिष्ठ haircuts - आफ्नो कामुकता जोड एउटा तरिका!
को टखने को भंग: पहिलो, सहायता र उपचार
आन्दोलन सट्टेबाजी रेखाहरू। bookmakers रेखाहरू अनुगमन
कसरी कुक गर्न डेसर्ट - Homemade आइसक्रीम
अदृश्य ब्रेसहरू - dentition को सुधार प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ नगर्ने मान्छे को लागि आउटलेट
चक्कु "च्याउ पिकर" - जंगल मा वफादार सहायक